प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभा, ६० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव | गृहपृष्ठ
Home लगानी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभा, ६० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव
असार ९, काठमाडौं (अस) । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मङ्गलवार विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले सिमरामा बिहान १०ः३० बजे सभा बोलाएको हो । असार मसान्तभित्र रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा कम्पनीले विशेष साधारण सभा मार्फत ६० प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव पारित गर्न लागेको हो । हाल रू. ६४ करोड १५ लाख २० हजार चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको हकप्रद पश्चात रू. १ अर्ब २ करोड ६४ लाख ३२ हजार चुक्तापूँजी पुग्नेछ ।
सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असार २ गते बुक क्लोज गरेकाले असार १ गतेसम्म कायम सदस्यहरु सभामा भाग लिन पाउनेछन् । सभाको प्रस्तावमा हकप्रद भएकाले यसको प्रयोजनका लागि भने कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाए पश्चात मात्र बुक क्लोज तय गर्नेछ ।
असार २ गतेको बुक क्लोज भने ६० प्रतिशत हकप्रदका लागि नभएर विशेष साधारण सभामा सहभागि हुनका लागि मात्र लागू हुनेछ । यस कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा रू. १३ करोड ७३ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिसम्ममा कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. २३ करोड २९ लाख जम्मा भएको छ ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभा (कहिले )
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको नाफा ६ करोड ८३ लाख